कांग्रेसमा किचलो, गुटको जालोले पार्टी कमजोर — Motivatenews.Com
चैत्र ३ काठमाडौं– कुनै बेला मुलुकका हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा पहलिो भूमिकामा उभिने नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ ।
सत्ताको अनुभवी काग्रेससँग प्रतिपक्षमा रहँदाको अनुभवसमेत उत्तिकै छ । तर, यतिबेला आफ्नो अनुभव देखाउन कांग्रेस चुकिरहेको छ । अहिले कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक गुटगत राजनीतिको किचलोमा रहेको आजको राजधानी दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ ।
पार्टीको १३ औं महाधिवेशनका समयमा शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति पदका लागि उम्मेदावरी दिएपछि कांग्रेसभित्र त्यसै बखत अर्को समूको नेतृत्व गर्दै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैचारिक समूहका रुपमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।
१३ औं महाधिवेशनबाटै कांग्रेसमा तीन समूह स्थापित भएका थिए । सभापति देउवा आफैको एउटा गुट छ । सो गुटका हस्तीहरुमा उपसभापतिद्वय विजयकुमार गच्छदार र विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरणमहल र नेताहरु बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक लगायत छन् ।
यसैगरी, पौडेल समूहमा प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी, सीतादेवी यादव, दिलेन्द्रप्रसाद बढू, बलबहादुर केसी लगायत छन् । पूर्वमहामन्त्री सिटौला समुहतर्फ गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, प्रदीप पौडेल, शिव हुमागाइँ लगायत छन् ।
हाल आएर कांग्रेसभित्र कांग्रेसको इतिहाससँग जोडिएको कोइराला परिवारसमेत यतिबेला आफ्नो स्थानलार्य दरिलो बनाउन सक्रिय रुपमा देखिउको छ । कांग्रेसभि नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो भूमिकालाई यो समूशकाट अगाडि बढाउँदै लगिरहेका छन्।
उनीसँगै कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेतृ सुजाता कोइरालासमेत देशका विभिन्न भागमा हुने कार्यक्रममा एउटै मालामा जोडिन पुगिरहेका छन् । उनीहरुलाई डा. मिनेन्द्र रिजाल, दीपक गिरी र दीपक खड्कालगायतको साथ रहँदै आएको छ ।